China VSD Vertical Sump Pump (Repalce SP) mpanamboatra sy mpamatsy | damei kingmech pump
Paompy entiko amin'ny andriamby
Paompy drive andriamby MZF
Model6Y LYD Pump6 API VS4 Pump
HFD paompy friz marindrano (Repalce AHF)
HAD Pump aburive duty slurry pump (Repalce AH)
Fahafahana: 17-1267m3 / h
Fitaovana: Cr27, Cr28, fitaovana vita amin'ny lamba vita amin'ny fingotra
Ny paompy karazana VSD dia mitsivalana, paompy slurry centrifugal milentika anaty sump hiasa. Natao hanaterana sombin-javatra marokoroko sy matevina ary avo lenta izy ireo. Ireo paompy ireo dia tsy mila tombo-kase sy rano famehezana. Izy ireo koa dia azo ampiasaina amin'ny fomba mahazatra noho ny adidy suction tsy ampy. VSD eto dia midika hoe Vertical Sump Duty Slurry Pump.
izay mifanaraka amin'ny toe-piainana miasa amin'ny sehatra lalindalina kokoa. Ny fananganana fitarihana torolàlana dia ampiana amin'ny paompy amin'ny alàlan'ny paompy mahazatra, noho izany ny paompy dia miaraka amina fandidiana maharitra kokoa sy ny faritra fampiharana bebe kokoa, fa ny rano manondraka dia tokony apetaka amin'ny fitarihana.
Ny ampahany mando amin'ny paompy VSD karazana dia vita amin'ny metaly mahatohitra abrasion
Ny tapany rehetra amin'ny paompy VSD ao anaty rano dia alahatra amin'ny valiny ivelany. Izy ireo dia mifanaraka amin'ny fitaterana slurry abrasive zoro tsy misy sisiny
Assembly of Bearing 一 Ny bearings, ny hazo sy ny trano dia zara raha ampitahaina mba hisorohana ny olana mifandraika amin'ny fiasan'ny zana-kazo cantilever amin'ny faritra haingam-pandeha voalohany.
Ny fivoriambe dia nohosorana diloilo ary nohomboan'ny labyrint; ny ambony dia voadio ny diloilo ary ny ambany kosa arovan'ny flinger manokana. Ny faran'ny ambony na ny faran'ny fiara dia karazan-tsarimihetsika mifanila ary ny fiolahana ambany kosa dia fametahana roa miaraka amina fijanonana farany. Ity famolavolana haingam-pandeha avo lenta ity sy ny hazo goavambe dia esorina
ny filàna filany anaty rano ambany kokoa.
Column Assembly 一 Namboarina tanteraka tamin'ny vy malefaka. Ny maodely VSDR dia rakotra elastomer
Casing 一 Manana fametahana bolt-on tsotra eo am-pototry ny tsanganana. Izy io dia novokarina tamin'ny alika mahatohitra ho an'ny SP ary avy amin'ny elastomer miolika ho an'ny VSDR.
Impeller 一 Impellers suction avo roa heny (fidirana ambony sy ambany) dia miteraka enta-mavesatra mitondra axial ambany ary manana lava-bato mavesatra ho an'ny fanoherana ny akanjo ambony indrindra sy ny fikirakirana solida lehibe. Manaova alika mahazaka, polyurethane ary impeller elastomer miolika dia azo ovaina. Ny impeller dia namboarina axally ao anaty casting mandritra ny fivorian'ny shims ivelany eo ambanin'ny tongony misy trano. Tsy ilaina ny fanitsiana fanampiny.
St snap-on elastomer na polyurethane ho an'ny paompy VSD sy VSDR. Ny strainers dia tafiditra ao anaty lavaka fidirana.
St elastomerera snap-on novolavolaina ho an'ny VSDR.
Atsofohy Pipe Metal ho an'ny VSD; elastomer rakotra ho an'ny VSDR. Ny faritra metaly mando rehetra dia arovana tanteraka.
Bearings ao anaty rano 一 Tsy misy
Fihetsiketsehana 一 Fifanarahana fampifangaroana aotisitra ivelany azo alefa amin'ny paompy ho safidy. Raha tsy izany, ny mpanetsiketsika mekanika dia apetaka amin'ny vatan-kazo lava manitatra avy amin'ny mason'ny mpanentana.
Fitaovana 一 Ny paompy dia azo amboarina amin'ny fitaovana manohitra sy manimba
Metallurgical, harena ankibon'ny tany, arintany, hery
Previous: VFD Vertical Froth Pump (Repalce AF)
Manaraka: PAD Malemy paika Slurry paompy (Repalce L / M)
Paompy API610 OH5 (CCD)
API610 OH3 Model GDS Pump
Paompy API610 BB4 (RMD)